Imandarmedia.com.np: यी हुन् प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीमाथि सरकारले लगाएका गम्भीर ९ आरोप !
Big News, Main News, News, Title Big News » यी हुन् प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीमाथि सरकारले लगाएका गम्भीर ९ आरोप !
यी हुन् प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीमाथि सरकारले लगाएका गम्भीर ९ आरोप !
अख्तियार दुरुपयोग अायोगका तत्कालिन प्रमुख अायुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई महाभियोग लागेको सात महिना नवित्दै प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
सुशीला कार्कीमाथि सरकारले लगाएका ९ आरोप